Dhab ah Pirate Bay - Soo dejiso muusikada, filimada, bilaash!
Siyaabaha ugufiican ee lagu kobcin karo Khibradaada ku aadan Burcad Badeedda [Waxaa la cusbooneysiiyay Abriil 2019]
Waqtigu wuxuu noqon karaa qaraabo, laakiin sidoo kale waa mid xadidan. Waxaa jira maalmo aad u badan oo ay tahay inaan ku kharash gareeyno meerahan annaga noo ah. Sugitaanka durdur gaabis ah maahan sida aan u isticmaaleyno xilligan.
Burcad badeednimada waxay caan ku tahay bixinta deg deg ah oo hufan oo ku habboon waxyaabaha aad rabto. Sumcadan ayaa ah maxaa yeelay dad badani waxay gacan ka geystaan ​​abuurista iyo gelinta nidaamka si joogto ah, iyagoo gacan ka geysanaya abuuritaanka beel adeegsadeyaal isku fikir ah oo midba midka kale taageera.
Waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan Pirate Bay halkan haddii aadan aqoon u lahayn goobta: https://www.thepiratebay.wiki.
Markaad la kulanto durdur gaabis ah, waxay sababi kartaa la'aanta abuur ama faylka liita. Iskucelceliska adeegsadaha, arrinta kuma saabsana Pirate Bay. Waxay la jirtaa gundhigga ay ku leeyihiin guriga.
Siyaabaha ugu Fudud ee lagu Hagaajiyo Xawaaraha Soo Dejintaada
Waa muhiim inaad xasuusnaato xawaaraha soo degsiga iyo soo dejinta ee ISP-gaagu uu kugu soo diro inta lagu gudajiro iibka ay ka tarjumayaan inta ugu badan ee aad ku guuleysan karto. Meelaha badankood dhif ayey ku dhowdahay heerarkan xayeysiinta ah. Sida caadiga ah qaanuunka suulka, waxaa fikrad fiican ah in la dalbado 50% xawaaraha dhaqsaha badan ee aad u maleyneyso inay lagama maarmaan u tahay in la hubiyo inaad khibradda ugu fiican heleyso.
Taasi micnaheedu waa haddii aad u maleyneyso in 50 Mbps ay dhakhso ugu filan tahay in lagu daboolo baahiyahaaga xawaaraha Internetka, markaa waa inaad doorataa 75 Mbps bedelkii.
Waxaa kale oo muhiim ah in la xasuusto in MBps iyo Mbps yihiin naqshado kala duwan. Haddii aad leedahay 1.44 MBps, markaa taasi waxay u dhigantaa qiyaastii 11.5 Mbps. Qaadashada "B" micnaheedu waa inaad ka weecdid megabits una wareeg megabytes daqiiqaddiiba.
Markaad sare u qaaddo xawaarahaaga, ka dib halkan waxaa ah qaabab dheeri ah oo loo hagaajiyo khibradahaaga ku saabsan The Pirate Bay.
1. Hubi Routerkaaga iyo Habkaaga
Haddii aad la kulanto xiriir internet gaabis ah, markaa modemkaagu wuxuu u badan yahay inuu eedeeyo. Waa maxay waxa ugu horeeya ee aad sameysid marka aad la kulanto dhicitaanka xogta? Waxaad dib u dejineysaa modem-ka. Haddii taasi shaqeyn weydo, ka dib waad furaysaa router-ka, ka dibna dib u geliya mar labaad. Waxaa laga yaabaa inaad ubaahantahay inaad kor u qaaddo aaladahaan haddii aad la kulanto isku xirnaan isdaba joog ah intaad durdurineysid.
2. Baadh nidaamkaaga
Ma ogtahay markii ugu dambaysay ay ahayd in aad iskaan iska fiiriso fayraska ku jira nidaamkaaga? Malware, trojans, iyo waxyaabaha kale ee aan loo baahnayn ayaa daadin kara ilaha kombiyuutarkaaga. Markay taasi dhacdo, xawaarahaagu wuu ku dhacayaa taas. Way ku caawin kartaa inaad sameysid skaanka maalinlaha ah, gaar ahaan haddii aad had iyo jeer kala soo baxdid durdurro.
3. Yaree faragelinta nidaamkaaga.
Waxaa jira alaab la yiraahdo Webroot oo ka shaqeysa Mac®. Haddii uu shaqeynayo, ka dib wuxuu sababayaa faragelin nidaamka ku saabsan si aadan mar dambe u adeegsan karin howlaha kalmad-sheegashada. Waa inaad xirtaa softiweerka si aad ugu oggolaato daaqadda codka dhaqdhaqaaqa inuu soo baxo. Waxaa jira dhowr barnaamijyo iyo aalado kuwaasoo sababi kara faragelin habka soo dejinta ama xawaaraha internetka.
4. Wali ma socotaa shaandhayn?
Haddii aad kujirto xiriir DSL halkii aad kala xiriiri laheyd khadkaaga internetka, markaa tayada filterkaaga ayaa lagayaabaa inuu noqdo arin. Dhibaatooyinka ka dhaca khadka ayaa sababi kara hoos u dhac kedis ah, oo kugu qasbaya inaad dib uhesho. Dhibaatada kale ee ku jirta xaaladdan gaarka ah ee loo baahan yahay in laga fiirsado ayaa ah jiritaanka taleefan la'aan. Isku day inaad marto tijaabada go'doominta si aad u aragto haddii hal unug oo gaar ah ay abuureyso dhibaatooyinka aad kala kulanto The Pirate Bay.
# 5. Waxaad goobta ku leedahay bogg ISP ah.
Qaar ka mid ah ISPs ayaa xayiraya gebi ahaanba madasha markii aad isku dayeyso inaad gasho Pirate Bay. Qaarkood waxay u shaqeeyaan si ay u xakameeyaan waxyaabaha ay ka shakiyaan inay xaq u leeyihiin. Haddii aad la kulanto xaaladdan, markaa waxay ku caawin kartaa inaad isku daydo mid ka mid ah goobaha muraayadaha shaqada: https://tpb.wiki/.
# 6. Abuur xiriir toos ah.
Haddii aad ku shaqeyneyso wireless-ka markii aad galeysid Pirate Bay, markaa xawaaraha isku xirnaantaadu had iyo jeer waa gaabis yar yahay. Waxaad u baahan doontaa inaad isku daydo inaad toos ugu xidho modem bedelka haddii aad leedahay xadhig dhererkiisu ku filan yahay in lagu habeeyo doorashadan. Kadib isku day inaad marin u hesho muraayadda shaqeyneysa ee ugu wanaagsan ee Pirate Bay ee 2019 si aad u aragto haddii ay jirto meel looga baxo arrinta ISP ee suurtagalka ah: Pirate Bay.
Waxaa jiri kara arrimo faragalin kale ah oo sidoo kale tixgalinaya. Noocyada ka mid ah sanaadiiqda telefishanka qadiimka ah ayaa faragelin ku sameyn kara internetkaaga, xitaa haddii aysan helin wax macluumaad ah. Dhererka ama da'da fiilooyinkaaga ayaa waliba dhibaato yeelan kara. Waxaa sidoo kale jiri kara faragelin dibedda ah aaladaha kale ee elektiroonigga ah.
Markaad xalliso arrimaha suurtagalka ah ee horjoogsanaya xawaaraha deg degga ah, ka dib waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato dhammaan faa'iidooyinka qulqulka leh ee ay Pirate Bay bixiso maalin kasta.